China Musu mubato weMercedes Rori Kunze Kwekunze Door Bata Kuruboshwe / Kurudyi 9017600359 9017600459 0007601359 fekitari uye bhizimisi | ZODI Auto Spare Zvikamu
Oiri Mvura Sperator Bowl 20771578
Chikova cheMercedes Rori Kunze Kwekunze Bata Bata Kuruboshwe / Kurudyi 9017600359 9017600459 0007601359
OE HERE: 9017600359, 9017600459, 0007601359
Type: Bata remukova
Mota Kugadzira: YeMERCEDES-BENZ
Mota Masuwo Anobata Yakakwirira Yemhando Sprinter 901 902 903 Makonhi Emusuwo Bata 0007601359
Zita Mota Masuwo Anobata Yakakwirira Yemhando Sprinter 901 902 903 Makonhi Emusuwo Bata 0007601359
Garandi Mwedzi gumi nembiri
OEM OEM Chaiyo Dhizaini
Brand Super Zvikamu
Nguva yekubhadhara L / C, T / T, Western Union, Moneygram, Paypal
Pasuru Kwakarerekera Apex
Nguva yokutora Mukati memazuva gumi mushure mekusimbisa kubhadhara
Musika mukuru Nyika dzeEuropean, Kumabvazuva kumaodzanyemba kweAsia, Middle-kumabvazuva, Africa uye dzimwe kuAmerica
Kuiswa paMotokari: Kumashure kana kutsvedza Kuruboshwe Uye Kurudyi
Kune MERCEDES BENZ SPRINTER ATEGO AXOR
YeVW LT 1996-2006
Isu tiri nyanzvi yekugadzira auto zvikamu, inovheneka Volkswagen Transporter, Fiat Ducato, Ford Transit, Renault Master, Benz Sprinter, Iveco Mazuva ese etc.Kunze kwekugona isu tinogona kupa inotevera yakatendeseka mutengo uye mhando yepamusoro zvigadzirwa kwauri.
1. Dhoo Rakakiiwa
2. Bata Musuwo
4. kuvesa chinja
6. Vamwe (Taura nesu)
1, logo inowedzerwa seyakagadzirwa nevatengi.
2, Iyo yakazara huwandu hwesarudzo
3, Strict mhando kudzora
4, Yakasimba mukushandisa uye kutsamira kuita
5, Nyanzvi Yehunyanzvi Ruzivo;
6.Vanofunga nezveVashandi Vebasa.
7.Vakanaka Vagadziri Systerm uye Kubatana;
8, Yakasimba Order Management System;
9, Yakanaka uye Yakachengeteka Warehouse Nharaunda.
10.Packeging zvakanaka uye neatly, zvinoenderana clients'requirment
11.Provide nyanzvi kuraira kune vatengi mumusika wakasiyana
Series Chikamu Auto Chikamu Zita Hunhu Giredhi
Injini Chikamu Spark Plug, cylinder kit, head cylinder, cylinder, carburetor, piston set, piston ring set, pombi mafuta, pombi tsvimbo, vharuvhu seti, rocker ruoko, cam muteveri, cam anoteedzana ne shaft, centre clutch, yekunze batira, cam shaft, giya speedo, nezvimwe. OEM, A.
Zvokufambisa Zvikamu Shaft kick starter, crank shaft, housing assy, ​​yekubatanidza tsvimbo kit, sprocket set, clutch assy, ​​clutch disc, Clutch yekumanikidza ndiro, cheni etc. OEM, A.
Wheel Zvikamu Kumashure hub, cap kumashure bub, cap kumberi hub, kumberi hub, sprocket, kumberi brake disk, brake pad, brake shoe, rim, rubber kumashure hub, collar cushion, racing steering, akataura, bhaudhi sprocket kumashure, axle, hydraulic brake master cylinder etc. OEM, A.
Cable Zvikamu Thottle tambo, batira tambo, kumberi bhureki, mita tambo, kumberi switch tambo, kumhanya switch, mutsara webhatiri, waya sunga, chinja kumashure mabhureki, yekumhanyisa tambo etc. OEM, A.
Nhengo dzemuviri Kumashure kushamiswa kwekubata, kudhiraivha musoro musoro wembongoro, giya shanduko chitiviri, mudhiraivho wesimbi mbichana, akamedura tsvimbo, akamedura chitiviri, pedza muffler, rutsoka zororo rabha, mutakuri, divi mira, kumberi kuvhunduka, wepakati kumira, chigaro, peturu tangi, mubato bhaa, kumberi matope-gadhi, kumberi pedal tsvimbo, kickter starter, kumashure forogo ruoko, bracket musoro mwenje, lever seti, kuvesa coil etc. OEM, A.
Zvikamu zveMagetsi Clutch / brake switch set, bhatiri, kubhururuka-vhiri dhongi, batira / brake lever & switch assy, ​​Starter relay, runyanga, flasher, stator self assy, ​​bata kukiya, kukiya peturu, stator assy, ​​yekutanga stator / mwenje coil, C, D, I , chigadziri, switch switch, cap peturu nezvimwe. OEM, A.
Zvikamu zvepurasitiki Bulb holder, mita assy, ​​girazi, kesi yemusoro mwenje, chifukidzo chemafuta tangi, lever dziviriro seti, imba musoro mwenje, kumberi fender, lens muswe mwenje, kumashure fender, cheni chivharo, musoro mwenje, muswe mwenje, winker mwenje, divi rekuvhara nezvimwe . OEM, A.
Gasket akateedzana Mafuta chisimbiso kit, gasket humburumbira, gasket chiutsi, izere gasket kit, grip rubber seti, carburetor mubatanidzwa etc. OEM, A.
Zvishongedzo Muswe bhokisi, helmeti, chinamirwa, chivharo, mbatya, magurovhosi, pendi tenzi, alarm system-mp3, alarm system mp3-2, alarm system, peturu tangi net, kumashure kwetsoka chitiviri nemuvara, kumashure kwetsoka pedal neruvara inflator, kubata rubbe ne Ruvara, vhiri chisimbiso, kubata rabha nemuvara nezvimwe.
Hunhu & Sevhisi KuZODI, yedu yekutanga # 1 yagara ichipa vatengi vedu zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye yepamusoro sevhisi.
Kurumidza Kutungamira Nguva Isu takatsaurirwa kupa iyo inokurumidza kutendeuka nguva uye tinoshanda Zvakaomarara kwazvo kuona kuti ese ako mahedhiyo akwaniswa.
Mitengo isingakundike Isu tinoenderera mberi tichiedza kutsvaga nzira dzekudzikisa yedu yekugadzira mitengo, uye kupfuudza iyo yakachengetwa Kwako kwauri!
Kuzivisa kweBrand Chinangwa chechero chero chakasimba chiratidzo ndechekuwana danho rekuziva iro rinoisa pfungwa yehunhu uye kukosha kune vese vako vangangove vatengi.
Yakakosha Inopa Resource kugovana-Tinogona kugadzira iyo katarogu zvichibva nechikumbiro chevatengi kuti ikubatsire iwe kuvandudza misika mitsva;
General Order Ruzivo
Isu tinodada zvikuru nebasa redu uye nemhando dzakasiyana dzezvigadzirwa zvatinopa. Isu tine ruzivo rwekushandira Middle East, Africa, musika weUS, musika weEuropean uye musika weAfrica, musika wekumaodzanyemba kweAmerica.
Ndokumbira kuti muzive kuti yedu yekugadzira inotungamira nguva inoenderana nezvimwe zvinhu uye chinhu chinhu. Kubudirira kwedu kwave kwakavakirwa pakunzwisisa kwedu kwezvinodikanwa uye nemhando yekusimudzira uye kushambadza mazuva ekupedzisira.
Ndosaka tichigara tichiita chokwadi chekuti odha yega yega inoendeswa nenguva.
Tarisa pazasi kuti uwane rumwe ruzivo rwekuisa odha
2. Simbisa mutengo, kutungamira nguva, kurongedza chinodiwa, nguva yekubhadhara etc.
3. ZODI inotengesa inotumira iyo Proforma Invoice ine ZODI chisimbiso.
4.Mutengi anoita muripo wedipo uye titumire isu Bhisiti risiti.
5. Tichaudza mutengi kuti tawana mubhadharo, ronga kugadzirwa & kuzivisa iyo inofungidzirwa nguva.
6. End Kugadzira-Misa zvigadzirwa zvigadzirwa mafoto ekutenderwa. Iwe unogona zvakare kuronga wechitatu bato Kuongorora.
7.Vatengi vanoita mubhadharo weyero uye BEE Tumira zvinhu zvacho .Uyezve inogona kugamuchira nguva yekubhadhara-Balance inopesana neB / L Kopa Kana L / C Yekubhadhara Nguva. Zivisa iyo yekutevera nhamba uye tarisa chimiro chevatengi.
8. Order inogona kuti "pedza" paunogamuchira zvinhu uye kugutsikana nazvo.
9. Mhinduro kuBEE nezve Hunhu, Sevhisi, Mhinduro yeMusika & Pfungwa. Uye isu tinogona kuita zvirinani.
Mubvunzo: Ndezvipi zvikamu zve auto zvaunopa?
A: Injini yekumisikidza chikamu, YeMotokari chassis zvikamu, kumisa auto zvikamu, YeMota kufambisa sisitimu, YeMotokari mafirita, Brake pad zvikamu uye mamwe marudzi eAuto spare zvikamu.
Mubvunzo: Zvigadzirwa zvako zvinoshandiswa pasirese here?
A: Ehe, isu tinopa Mid-kumabvazuva, Africa, maodzanyemba America, maodzanyemba eAsia, Ukraine, Itari, Australia uye nezvimwe, Zvizhinji injini zvikamu zvinoshandiswa kwese kwese mukushandisa.
A: T / T 30% sezvo dhipoziti, uye 70% pamberi pakukurukura.
Mubvunzo: Zvakadii neyako nguva yekuendesa?
A: Kazhinji, zvinotora 3 kusvika10 mazuva ekushanda mushure mekugamuchira yako yekumberi kubhadhara. Iyo chaiyo yekuendesa nguva inoenderana nezvinhu uye huwandu hweodha yako.
Q: Unogona kubereka maererano ivhu?
Mubvunzo: Unoedza zvese zvako usati waburitsa?
Mubvunzo: Unoita sei bhizinesi redu kwenguva refu uye hukama hwakanaka?
A: 1.Tinochengeta mhando yakanaka uye yemakwikwi mutengo kuona vatengi vedu vachibatsirwa.
Pashure: Rori Belt Tensioner Pulley yeMercedes-Benz OEM 0005500833 0005501633
Zvadaro: Yakakwira Hunhu Musoro Lamp Inokodzera MB CABINA641 6418200861 LH 6418200961 RH 3818203961 LH 3818204061 RH
Fog Lamp yeBENZ ACTROS MP2 L: 9438200056 kana R: ...
Plastic Rear Mudguard Oem 9435200020 nokuti MB Act ...
kupisa kutengesa eEuropean anorema marori auto kupembedza pa ...
Factory Wholesale For Benz akamedura Drum OEM 62442 ...
OEM 9608103516 LH rori parutivi girazi reMercede ...
Kanda Iron Iron Mberi Brake Drum 6584210001 ye MB